Gobolka Soomaalida dalka Ethiopia: Hal bil iyo saddex Madaxweyne. – Xeernews24
Gobolka Soomaalida dalka Ethiopia: Hal bil iyo saddex Madaxweyne.
1. September 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Maamulka madaxweynihii hore, Cabdi Maxamuud Cumar,(Cabdi Iley) wuxuu eedda rabshadihii dhacay dusha ka saaray dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya.
Ugu dambayntiina, wuxuu Cabdi ku dhawaaqay 9 sanno oo uu gobolka xukumayey ka dib inuu xilka ka degey, ka dib culays badan oo la soo dersay.
Maalmo yar ka dib waxaa Cabdi laga dhoofiyey Jigjiga, waxaana loo qaaday Addis Ababa, halkaasoo muddo gaaban oo xabsi guri uu ku jiray ka dib maxkamad la soo taagay.
Dacdawad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamadda in ay siiso 14 maalmood oo ay ku soo dhamaystiraan caddaymaha dacwadda ay ku soo oogayaan Cabdi Maxamuud Cumar iyo lix qof oo kale, waxayna dalbadeen in xabsiga lagu sii hayo, maxkamadduna way ka aqbashay codsigaas.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna socday isku dhacyo meelo kala duwan laga soo sheegay, waxayna u dhaxeeyey Soomaalida iyo Oromada, kuwaasoo aan weli xal laga gaadhin.
Dadka ku fikirka ah Cabdi Maxamuud Cumar waxay qabaan in rabshadahaas iyo cawaaqibkii ka dhashay ay yihiin waxa fidnada ka bilaabay dhulka Soomaalida, halka kuwa ku kacsan Cabdina ay ku doodayaan in Cabdi Maxamuud Cumar uu sababsaday siddeed sanno oo dhulka Soomaalida ay ka dhacayeen xadgudbyo iyo cabburin dhan ka ah xuquuqul aadanaha.
3-da masuul midkoodna kuma iman rabitaanka iyo codka shacabka Soomaali state ee dhamaan waa rag si gaar ah loo soo xulay wakhti iyo ujeedo gaar ahna xilka loogu dhiibtay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/Iley-Ilkacase-Cagjar.jpg 380 804 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-01 08:22:152018-09-01 08:22:15Gobolka Soomaalida dalka Ethiopia: Hal bil iyo saddex Madaxweyne.
Ciidamada Maraykanka oo doon hub siday ka qabtay meel ku dhow Xeebaha Soomaalia... Beel ku hanjabtay in aysan la shaqeyn doonin Axmed Shiddo.